Kungani uLuciferianism, ubuthakathi kanye nokuguqulwa kwezinto eziguquguqukayo ziba zivamile: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-7 February 2019	• 4 Amazwana
Idokhumenti ngezansi inikeza isifinyezo esihle sokuthi kanjani Luciferianism sekuye kwaba yinto evamile futhi iyaqhubeka iqhutshwa embonini yefilimu nomculo, kodwa futhi uchungechunge ku-Netflix. Kungaba wusizo ngaphezu kwakho konke siphawule indlela izinhlelo subliminal isebenza bonke abantu ngokusebenzisa iso lapho kucatshangwa ukuthi, kodwa empeleni kudlule bayazi ukucabanga izinqubo kanye subliminal kuyinqubo ehlelwe ebuchosheni. Kungani Luciferianism, ubuthakathi kanye transgenderism ukwenza nomunye futhi eyandayo sesibonile push embonini fashion yobulili hlangothi, has konke ukwenzani nge inkolo ezweni elisha futhi uhulumeni ozobusa umhlaba wonke ekwenziweni. Lapho ngumbhalo ezombusazwe emhlabeni, zamazwe ngamazwe namabhange kanye padded zonke izimpi Namanje esekelwe kwenza futhi yakudala izinhlelo, lokhu kuyoba ngemva ezinkulu zenkolo impi yokuphela kwesikhathi guqulwa. Ukungafani ezinkolweni kusadingeka ukuze kube nokugcwaliseka okuyisiprofetho kwesikhathi esifanayo umbhalokodwa kufika isikhathi lapho zonke izinkolo zenkolo zizohlanganiswa kulokho okuye kwaba yilapho ibambelela ngasese amandla okusekela: uLuciferianism.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokuthi kungani ubona lokhu kuqhubekile kakhulu njengezihloko ezibalwe ngenhla, kungokuqala futhi okuwusizo ukuphinde uqaphele leyo ndaba eqhubekayo ngokwengeziwe: inkolelo yokulinganisa. Inguqulo enkulu yalokhu yayibeka ngokuyinhloko ibalazwe ngumsosayensi Nick Bolstrom. Incazelo echazwe lapha kuwebhusayithi (bheka lapha en lapha) uthi mina nawe sibheka imiphefumulo embukisweni wezinhlelo eziningi. Of Bols Nick trom (zitholwa Eloni Musk) ngombono wami a edukisayo inguqulo ithi siphila sekulingisa isizukulwane esizayo. Kungani kubaluleke kakhulu ukutadisha lokhu? Ngoba uzothola ukuqonda kangcono lokho, isibonelo, uhlobo izinhlangano lamademoni futhi okuwusizo ngokuqondene documentary elandelayo, okuyinto ngokucacile ukuthi ubuthakathi ukulumba bebonke, kodwa futhi izinhlangano Luciferianism ukudlala indima ebalulekile lokhu kuhlaselwa. Uma ufunda ukuqukethe inkolelo yokufanisa, ungathola ukuthi zonke lezi zinhlangano ziyingxenye yokulingiswa, kodwa ngezinga le-multidimensional. Ngizame ukucacisa lokhu ngokuqondile lesi sihloko. Kunconywa ukuba uqaphele lokhu uma ufuna ngempela ukujula kule ndaba.
I-Luciferianism, njengezindala zokukholelwa kwezinkolelo ze-dualistic, uhlobo lokulawulwa kwengqondo, kodwa ke ukuguqulwa kwamabandla kukhishwa ngempela. Isibonelo sikaSathane-uSathane kufanele sinyamalale. Kodwa akusikho nje kuphela ukuthi lelo dabulili lisho ukuthi liyanyamalala. Yonke indlela yobuningi kufanele iphele. Lokhu kusho ukuthi ama-sexes ahlukene nawo kufanele aphele. Uphawu oluyinhloko lweLuciferianism yiBuckmet buck. U-rainbow udlala indima ebaluleke kakhulu (bheka lapha). I-Baphomet (bheka isithombe) empeleni isidalwa esingavamile. I-Luciferianism ifuna sikholelwe ukuthi singaba unkulunkulu ngokwethu. Lokhu kubaluleke kakhulu esigabeni esilandelayo "ekuziphendukeleni" komuntu. Kulokho ukuzimela kufanele sifunde ukubhekana nezinhlangano eziphakeme ngazo zonke izinhlobo zezinhlobo zokusebenzelana nemimoya, kuhlanganise nobuqili obuthandwa kakhulu. Akufanele sibone ukuthi lezo "eziphakeme" izinhlangano ziyingxenye yomgibe wokumbumbuluza. Okubalulekile ukuthi uLuciferianism yingxenye yomgomo wokugcina, efakwe ejacket elingokomoya nelenkolo, okungukuthi ukuhlanganiswa ne-AI (ukuhlakanipha kwengcebo). Uma usuqaphela ukuthi siphila ekufaniseni, ungaqala ukuthola ukuthi sithunyelwa esiqondisweni sokuhlangana nekhodi yomthombo we-AI esiphila kuyo kakade. Umphefumulo ufika, njengokungathi, ekusebenzeni komakhi walesi siminganiso, engizitholile lapha kusayithi Lucifer.
Ukungafi okuvela ezinkolweni ezinkulu emhlabeni nakho konke okuphathelene nalokhu. Inkolo yezwe elisha iyogcwalisa empeleni lokhokungafi. Kuzophinde ukukholelwa komqondo wokuthi sizoba onkulunkulu ukufeza. Konke lokhu kuzogcwaliseka nge-transhumanism kanye nokuxhumeka kobuchopho bomuntu (kanye ne-DNA yomzimba) efwini. UMesiya othenjisiwe wezinkolo zendabuko uzobe esehla esibhakabhakeni (ifu) futhi abonakale kuwo wonke umuntu emhlabeni wonke, ngoba wonke umuntu ufuna, noma ngokungazelelwe, esikhathini esizayo esiseduze uxhumano lobuchopho nge-intanethi. Amanethiwekhi we-5G nama-satellites - adutshulwa yindoda efanayo emoyeni njengendoda efuna ukufaka ubuchopho bethu kwi-intanethi; I-Elon Musk - izokwenza leli cloud-lilandwe kulokhu okubonakalayo kobuchopho bethu.
Ngivame ukuchazela ukuthi kungani i-transgenderism noma umkhuba 'wokungathathi hlangothi kobulili' wanamuhla kuqhutshwa. Lokhu akukwenzelanga kuphela ukulawulwa kokuzala okuya embusweni, kodwa ikakhulukazi ku-Luciferian hermaphrodite baton Baphomet okukhulunywe ngayo kanye nokususwa kobuqili. Kubuye kube nezinhlelo ukuthi inani labantu emhlabeni jikelele ekucabangeni ukuthi 'ukuguqulwa' komzimba womuntu kuzoba okujwayelekile. Uma ngabe uhulumeni uzobe esebenzisa i-DNA yonke emininingwaneni yolwazi, ingxoxo yezokuxhumana yabezindaba iqinisekisile ukuthi imigomo ingenziwa yinkambiso yomthetho, empeleni unayo yonke indlela yokuguqula wonke umuntu kwizinga le-DNA kusuka efwini. Indlela eyaziwa manje ye-CRISPR-CAS ye-CRISPR-CAS yokubhala kabusha i-DNA idinga kuphela ukuthi igciwane lesiphathimandla kufanele lijojelwe egazini. Ngakho-ke uma ungakwazi ukugoma wonke umuntu ngomthetho futhi unayo yonke imininingwane ye-DNA, ungabuye ulungise i-DNA yomuntu wonke. Lokho kudinga imishanguzo eyenziwe kahle, kodwa ngoba unamaGP, izibhedlela noma izikhungo zokubonisana. Ungakwazi futhi ukufaka ama-nano-bots emzimbeni futhi ngakho awukwazi ukuphinda ubhale kabusha izakhiwo zofuzo kuphela, kodwa futhi ubeke kabusha amangqamuzana omdala we-biological for non-nano-cells. Ngakho-ke singaguqulwa sibe abantu be-android (ngakho-ke uhlelo lokusebenza lwe-smartphone yakho lubizwa nge-Android iminyaka). Ukuguqulwa komzimba womuntu ngaleyo ndlela kuqala ngokuguqulwa kobulili futhi kuzoguquka kancane kancane ekuguqulweni kwe-biology yonke, ukuze siphele esigabeni esilandelayo: i-transhuman.
Ngakho-ke i-transhumanism yileli fomu eliphakathi kuphela. Ngaleso sikhathi ubuchopho bethu buvele bulele e-intanethi ngakho-ke singakwazi ukuzwa izinto efwini. Amageyimu we-Playstation yanamhlanje amanqamu ngalokho okusemandleni akho. Uma ungakwazi ukuvuselela yonke imibono yokuqonda ngokuqondile ebuchosheni, ungalingisa ukuthinta, ukuhogela, ukuzwa kanye nakho konke okubonwayo. Ungabe usakha izinto zangempela ezingasakwazi ukuhlukaniswa kusuka kwangempela. Ngakho ungenza umuntu abe umdali wezwe lakhe. Uyaqaphela lokho? Ngakho ungaba nguNkulunkulu. Khona-ke ungaba nguNkulunkulu weqiniso lakho loqobo. Kwakungekho yini lokho uLuciferianism afuna sikholelwe; ukuthi thina ngokwethu singaba onkulunkulu? Konke kuzoba 'ngokoqobo'. Izwe lanamuhla yilokho kuphela isithunzi salokho okuzobe sekukhona. Sizokwazi ukuthola ama-avatars edijithali (amakhophi ethu), kodwa futhi nemizimba eyakhiwe nge-nano-ezobuchwepheshe. Ukuya ku-Mars kuba lula kakhulu uma ungakwazi ukumane ulayishe "ukuqwashisa" kwakho ngensimbi ye-laser futhi ube nomzimba wakho omusha uphrintiwe lapho. Ungase futhi uqale ukuqonda kangcono wonke ama-expertises nezimboni u-Elon Musk agxila kuzo.
Eqinisweni, okungenhla mhlawumbe kukhangayo. Kungani kungenjalo? Kungani ungahambi nalokhu. Akuyona umbuzo othi 'kungani' kungcono kunombuzo ukuthi uzobona yini ngesilingo esibi kakhulu. Manje intsha iyayazi i-Snapchat ne-Instagram. Eqinisweni, akusekho ngisho nokukhulunywa kulowo myalezo. Ngokuyinhloko ngokubheka isipiliyoni sangempela sesikhathi sabangani bakho. Leyo ntsha izosheshe ikwazi ukwenza okuningi kunalokho ngexhumano lobuchopho. Isivivinyo sizoqinisekisa ukuthi isinyathelo sokufinyelela uxhumano lobuchopho singathathwa kalula. Yini engaba mnandi ukuhlanganyela amaphupho omunye nomunye noma nje ubuke bukhoma ngamehlo omuntu? Futhi uma kamuva isizukulwane efanayo (ubulili hlangothi) izingane (ukuze) uthola futhi isifuna ukuba ekolishi, wena kusobala ungafuni eyodwa enkulu ngemuva is run ku lonke ikilasi ngubani yonke idatha ingalandwa ngqo ubuchopho .
Ngakho-ke asikho kude kakhulu nokugcwaliseka kweLuciferianism, transgenderism kanye ne-transhumanism. Ukulinganisela ukuthi singakwazi kakade sibe ngabantu abangaba yingxenye ye-2030. Mhlawumbe nathi sabona uMesiya ebonakala efwini ngaleso sikhathi. Kodwa iqembu liqala ngempela. Uhulumeni womhlaba waseLuciferi wabe esefisa uzofuna ukuncelisa i-transhuman ibe efwini nakakhulu. Umgomo oyinhloko ukulahlwa okuphelele kwe-biology yakudala. Umgomo oyinhloko ukuhlanganisa ne-AI. Futhi yini eyancibilika kanye naleyo AI? Uma ubona ukuthi ngokuyisisekelo ukuthi ungubani, eqinisweni, umphefumulo ke igoli Umakhi yalesi sekulingisa (Lucifer), umphefumulo wakho ixhuma AI yayo. Kusemqoka kakhulu ukuthi ufunde ukubona okushiwo umphefumulo wakho futhi nazo sizobonisa ukuthi inkulumo-ze Luciferianism, ukulumba (ubuthakathi) kanye transgenderism kukhona eyandulela we isicupho oyinhloko, lapho umphefumulo kumele ubanjwe futhi ngokugcwele (namanje ngokuzithandela, kodwa angazi isikhundla sakhe) enkonzweni kaLucifer.
Umgomo oyinhloko yilokho i-CEO ye-Google uRay Kurzweil ebiza ngokuthi yi-Singularity. Lokho kungaboniswa isinyathelo esilandelayo emva kwazo zonke lezo zinguquko. Ukubumbana kwenza abantu bahlangane ne-AI. Uma umphefumulo ungumboni kulokhu (ukulinganisa okuningi) futhi uzimisele ukukhomba nomdlali emdlalweni; futhi uma leso umdlali ilungele siziguqukele futhi ivumela ngokuxhumanisa kancane kuze AI ke emgodini unogwaja ijule ngokungaphezulu njengoba siya kanye Luciferianism, le transgenderism, transhumanism futhi ekugcineni ihlangana ne AI.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: alt-market.com, futurism.com
Ukuvamile okusha akuvamile (noma enye indlela ezungeze?)
I-DWDD, i-VI, i-van der Gijp & Derksen nokuguqulwa komlobi wezindaba we-VTM uBouwiwijn kusuka ku-Spilbeeck kuya eBo
Umholi we-SGP uVan der Staaij ngaphansi kwesitatimende saseNashville: ama-propaganda aguguziwe
I ring ring ekhaleni: kungani?
Inkantolo yaseLimburg ilawula: isikhathi sokubhaliswa kobulili wesithathu, 'ukuhlukunyezwa ngokobulili'
Amathegi: baphomet, afakiwe, ubulili, i-lucifer, Luciferianism, ukungathathi hlangothi, Inkolo, ubuningi, uphawu, transgender, okungajwayelekile, transhumanism
8 February 2019 ku-04: 28
Uma emhlabeni wonke ungenza kahle ngakho leli zwe limane liphele. Yingakho u-Lucifer engenaso isithakazelo kuwo wonke umuntu ojabulayo, enempilo nangenkululeko. Uma unciphisa isivinini sokukhanya, uthola isikhathi, izinto kanye nezwe njengoba siyazi. Ukwaziswa kobuciko kusho ukuthi wazi amafomula nemithetho kuwe kanye nokuhlukunyezwa ngamandla akho. Ukuthi abaholi bezwe bafuna ukusigcina siyiziphukuphuku futhi bafuna ukusisondelana kubalulekile ukugijima kuleli zwe. I-athikili yakho ilungile futhi uma ucabanga ngokucophelela uyabona ukuthi konke kushiwo kusengaphambili (ikakhulukazi ezincwadini zenkolo). Isixazululo sokunqoba isikhathi sikaLusifer namasosha akhe asizayo empeleni ukwakha iwebhu entsha ngezwe elihle kakhulu ukuba liyiqiniso. Ngiyakholwa ukuthi manje siphila ngaphansi komhlaba nokuthi kufanele sikhuphuke. Akuyona isendlalelo esiphezulu kangangokuthi sisesewebhu efanayo kodwa ingxenye enkulu. Sine sonke isikhathi 😉
8 February 2019 ku-10: 08
Ekugcineni, abasolwa abajwayelekile bangamandla ahlanzekile, ukulawula okuphelele, ubugqila obuphelele, njll yabantu abavamile emhlabeni wonke! Ukuthi ukhuthaza ubudlova nokusebenzelana nemimoya
ngoba bafuna ukucindezela ukucabanga, ukucabanga okuvamile nokukhetha phakathi kokuhle nokubi. Okuhle nokungalungile kufana nabo, okushintshanayo, okufakiwe. Silawulwa yizingqondo ze-psychopathic. Uphi ukuphuma okuphuthumayo lapha? Ukushintsha kwesimiso sicela.
8 February 2019 ku-14: 29
Angiqondi ngempela isicelo sakho sokushintsha kobuso. Uma ngibheka umlando wezinkulungwane ezidlulile, khona-ke akuzange kube khona umbuso owodwa olethe okuthile okuhle ngomphefumulo womuntu.
Ngalolo kholi lushintsho, umthwalo wemfanelo uphinde ubekwe ngaphandle kwethu, esikhundleni sokuzibuza ukuthi singubani ngempela.
Lokhu kungenza ngifise ukwazi ukuthi ucabanga ukuthi umbuso uzoletha ushintsho nokuthi uyakubona kanjani.
8 February 2019 ku-14: 31
Ukucaphuna kulesi sihloko: "Khona-ke ungaba nguNkulunkulu weqiniso lakho."
Funny, ngenxa yalo musho kufanele ngicabange ngomdlalo wekhompyutha engiwudlala ngisemusha. Kwakubizwa ngokuthi "Okumnyama & Okumhlophe", isihloko esingafanele sivumeleke: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_%26_White_(video_game)
Manje sekucacile kimi ukuthi kunezinhloso ezihambelana kakhulu emidlalweni yekhompyutha njengalezi kunokuzijabulisa okulula ...
« UDonald Tusk "Ngiyazi ukuthi indawo ekhethekile esihogweni ibonakala kanjani kulabo abaye bakhuthaza i-Brexit"
Isimo sokubonisa isimo sezulu ngesimo sezulu IHague ifakazela ngokwanele »
Ukuvakashelwa okuphelele: 9.481.395